Abaphuhlisi beapps ze-Android, iiMvavanyo zikaGoogle zokuDlala zinokubonelela ngolwazi olubalulekileyo kunye nokunceda ukwandisa ukufakwa. Ukuqhuba uvavanyo olucwangciswe kakuhle kunye nolucwangciswe kakuhle lwe-A / B lungenza umohluko phakathi komsebenzisi ofaka usetyenziso lwakho okanye okhuphisana nalo. Nangona kunjalo, kukho iimeko ezininzi apho iimvavanyo ziqhutywa ngendlela engafanelekanga. Ezi mpazamo zinokusebenza ngokuchasene neapp kunye nokwenzakalisa ukusebenza kwayo. Nasi isikhokelo sokusebenzisa uvavanyo lweGoogle Play kuvavanyo lwe-A / B. Ukuseta uvavanyo lweGoogle lokuDlala unokufikelela kwifayile ye-